Amsterdam မြို့ကိုသွားလည်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားဖို့လိုမလဲ? – Trend.com.mm
Amsterdam မြို့ဟာ ရောက်ဖူးတဲ့သူတိုင်း အမြဲတမ်းထပ်သွားချင်နေကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ Amsterdam ဟာ ဥရောပတစ်ခွင်မှာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွေနဲ့လှပတဲ့အဆောက်အဦးတွေကြောင့်
နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ Netherlands နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် ပြတိုက်တွေ၊ပန်းချီပြခန်းတွေကို သတိမထားမိပဲမနေနိုင်စေတဲ့
အနုပညာမြို့တော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဥရောပရဲ့အမိုက်စားကလပ်တွေလည်း အများဆုံးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့။
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရီးသွားဘလော့ဂါတွေသာမက ခရီးသွားရတာနှစ်သက်တဲ့သူတွေ ကပါ နေရာအနှံ့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Amsterdam လို သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြို့လေးကိုမရောက်ဖူးသေးရင်တော့ မဖြစ်သေးဘူးနော်။ အဲ့ဒါကြောင့် Amsterdam ကိုသွားလည်မယ်ဆိုရင်သိထားသင့်တဲ့ခရီးသွားမှတ်စုလေးတွေ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။Amsterdam ကို ဘယ်အချိန်သွားလည်ကြမလဲ?
တစ်ချို့ခရီးသွားတွေကတော့ ကျူးလစ်ပန်းလေးတွေမြင်ဖူးချင်ကြတာမို့လို့ ဧပြီလလယ်လောက်နဲ့ မေလအစောပိုင်းမှာသွားလေ့ရှိပါတယ်။တစ်ချို့ကျတော့လည်းနယူးရီးယားပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲကြတယ်။တကယ်လို့သင်ကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာအနားယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်တိုဘာလကနေမတ်လအတွင်းသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနဲ့သြဂုတ်လကတော့ လူအများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့လတွေပါ။Amsterdam မှာဆိုရင် ဇန်န၀ါရီလက အအေးဆုံးဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လကတော့ အပူဆုံးလပါ။
Amsterdam ရောက်လို့ လမ်းလျှောက်ပြီးမလည်ချင်ဘူးဆိုရင် စက်ဘီးငှားပေးတဲ့ဆိုင်လေးတွေ ရှိပါတယ်။စက်ဘီးသွားဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းလည်းလုပ်ပေးထားတာကြောင့် ကားတွေကြားကလည်းဖြတ်သွားစရာမလိုပါဘူး။ စက်ဘီးနဲ့နေရာစုံကိုသွားနိုင်သလို ရထား၊ဘတ်စ်၊မြေအောက်ရထားလိုင်းလည်းရှိပါတယ်။
၃။Amsterdam ကိုမသွားခင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ?
နွေရာသီကာလဆိုရင် Amsterdam မှာခရီးသွားအများစုလာရောက်လည်ပတ်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် Amsterdam ဟာ ခါးပိုက်နှိုက်တွေပေါများတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကားစီးတာဖြစ်စေ၊လမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်စေ၊ဈေးဝယ်နေတာဖြစ်စေ သင့်ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသေချာဂရုတစိုက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၄။Amsterdam ရောက်ရင် ဘယ်နေရာတွေကိုသွားလည်ကြမလဲ?
အရင်ဆုံး Rijksmuseum ကိုသွားလည်ပါ။အဲ့ဒီပြတိုက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့
သွားမယ်ဆိုရင် မနက် ၁၀နာရီမတိုင်ခင်သွားပါ။မဟုတ်ရင် လူအုပ်ကြီးနဲ့တိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်လှပတဲ့ပြတိုက်ကတော့ Anne Frank Huis ပါ။အဲ့ဒီပြတိုက်ဟာ ဆိုရင် နှစ်တိုင်း ခရီးသွားပေါင်း ၁သန်းကျော်လည်ပတ်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။အရမ်းမိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို မလွတ်သွားပါစေနဲ့။
အနားယူမယ်၊ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Vondelpark ကိုသွားပါ။အဲ့ဒီမှာ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူနိုင်ပြီး မြို့လေးရဲ့ အကောင်းဆုံးပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်က အနုပညာပန်းချီလက်ရာတွေကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသူဆိုရင် Van Gogh museum ကိုသွားလည်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။Vincent van Gogh ရဲ့ အံ့မခန်းဖွယ်ပန်းချီလက်ရာတွေ၊စာတွေနဲ့ တခြားနာမည်ကြီးပန်းချီပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုစုဆောင်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်း လူသန်းပေါင်း ၁.၆သန်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပြတိုက်တစ်ခုပါ။
Amsterdam မြို့လေးကို အပေါ်စီးကနေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် A’DAM Tower ကိုချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။A’DAM Tower ရဲ့ အစွန်းမှာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုစွန့်စား
ချင်သူတွေအတွက် ဒန်းလည်းရှိပါတယ်။ဥရောပရဲ့ အမြင့်ဆုံးဒန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Amsterdam ရောက်ရင် အဓိကလုပ်ရမှာက တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွေအောက်ကနေ လှေစီးပြီးလည်ပတ်ကြည့်ရတဲ့အရသာ
လေးကို ခံစားဖို့မမေ့ခဲ့ပါနဲ့။အဲ့ဒီမှာလှေလေးတွေရှိပါတယ်။များသောအားဖြင့် တစ်နာရီနီးပါးကြာအောင်လှည့်ပတ်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဈေးနှုန်းလည်းအစားစားရှိတဲ့အတွက်
ကိုယ့်ရဲ့ ဘတ်ဂျက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အပျော်စီးလှေလေးတွေလည်းသေချာရွေးချယ်ပြီး Amsterdam မြို့လေးရဲ့ အလှကိုခံစားကြည့်ပါ။
လည်ပတ်စရာတွေက မကုန်သေးပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ ခရီးသွားခေါင်းဆောင်ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်ရင် နှံ့စပ်သလောက် ပျော်ရွှင်စရာတွေခံစားရမှာပါ။Amsterdam ရောက်
Amsterdam မွို့ဟာ ရောကျဖူးတဲ့သူတိုငျး အမွဲတမျးထပျသှားခငျြနကွေတဲ့နရောတဈခုပါ။ Amsterdam ဟာ ဥရောပတဈခှငျမှာ ဥမငျလိုဏျခေါငျးတှနေဲ့လှပတဲ့အဆောကျအဦးတှကွေောငျ့
နာမညျကြျောကွားထငျရှားတဲ့ Netherlands နိုငျငံရဲ့မွို့တျောပဲဖွဈပါတယျ။ လမျးလြှောကျသှားမယျဆိုရငျတောငျ ပွတိုကျတှေ၊ပနျးခြီပွခနျးတှကေို သတိမထားမိပဲမနနေိုငျစတေဲ့
အနုပညာမွို့တျောတဈခုလညျးဖွဈပါသေးတယျ။ ဥရောပရဲ့အမိုကျစားကလပျတှလေညျး အမြားဆုံးရှိတဲ့နရောတဈခုပေါ့။
အခုဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ခရီးသှားဘလော့ဂါတှသောမက ခရီးသှားရတာနှဈသကျတဲ့သူတှေ ကပါ နရောအနှံ့ကိုသှားရောကျလညျပတျနကွေပါပွီ။ဒါပမေဲ့ Amsterdam လို သာယာပြျောရှငျဖှယျကောငျးတဲ့မွို့လေးကိုမရောကျဖူးသေးရငျတော့ မဖွဈသေးဘူးနျော။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Amsterdam ကိုသှားလညျမယျဆိုရငျသိထားသငျ့တဲ့ခရီးသှားမှတျစုလေးတှေ ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။Amsterdam ကို ဘယျအခြိနျသှားလညျကွမလဲ?
တဈခြို့ခရီးသှားတှကေတော့ ကြူးလဈပနျးလေးတှမွေငျဖူးခငျြကွတာမို့လို့ ဧပွီလလယျလောကျနဲ့ မလေအစောပိုငျးမှာသှားလရှေိ့ပါတယျ။တဈခြို့ကတြော့လညျးနယူးရီးယားပှဲတျောကို ဆငျနှဲကွတယျ။တကယျလို့သငျကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တိတျဆိတျစှာအနားယူခငျြတယျဆိုရငျတော့အောကျတိုဘာလကနမေတျလအတှငျးသှားရောကျလညျပတျနိုငျပါတယျ။ဇူလိုငျလနဲ့သွဂုတျလကတော့ လူအမြားဆုံးလာရောကျလညျပတျကွတဲ့လတှပေါ။Amsterdam မှာဆိုရငျ ဇနျနဝါရီလက အအေးဆုံးဖွဈပွီး သွဂုတျလကတော့ အပူဆုံးလပါ။
Amsterdam ရောကျလို့ လမျးလြှောကျပွီးမလညျခငျြဘူးဆိုရငျ စကျဘီးငှားပေးတဲ့ဆိုငျလေးတှေ ရှိပါတယျ။စကျဘီးသှားဖို့အတှကျ လမျးကွောငျးလညျးလုပျပေးထားတာကွောငျ့ ကားတှကွေားကလညျးဖွတျသှားစရာမလိုပါဘူး။ စကျဘီးနဲ့နရောစုံကိုသှားနိုငျသလို ရထား၊ဘတျဈ၊မွအေောကျရထားလိုငျးလညျးရှိပါတယျ။
၃။Amsterdam ကိုမသှားခငျ ဘာတှသေိထားသငျ့လဲ?
နှရောသီကာလဆိုရငျ Amsterdam မှာခရီးသှားအမြားစုလာရောကျလညျပတျကွလေ့ ရှိပါတယျ။ဒါ့အပွငျ Amsterdam ဟာ ခါးပိုကျနှိုကျတှပေေါမြားတယျဆိုပွီး နာမညျကွီးပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ကားစီးတာဖွဈစေ၊လမျးလြှောကျနတောဖွဈစေ၊စြေးဝယျနတောဖွဈစေ သငျ့ရဲ့ ပိုကျဆံအိတျကိုသခြောဂရုတစိုကျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
၄။Amsterdam ရောကျရငျ ဘယျနရောတှကေိုသှားလညျကွမလဲ?
အရငျဆုံး Rijksmuseum ကိုသှားလညျပါ။အဲ့ဒီပွတိုကျဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကောငျးဆုံးပွတိုကျတဈခုအဖွဈသတျမှတျထားကွတာဖွဈပါတယျ။တကယျလို့
သှားမယျဆိုရငျ မနကျ ၁ဝနာရီမတိုငျခငျသှားပါ။မဟုတျရငျ လူအုပျကွီးနဲ့တိုးသှားနိုငျပါတယျ။
နောကျထပျလှပတဲ့ပွတိုကျကတော့ Anne Frank Huis ပါ။အဲ့ဒီပွတိုကျဟာ ဆိုရငျ နှဈတိုငျး ခရီးသှားပေါငျး ၁သနျးကြျောလညျပတျကွတဲ့နရောတဈခုပါ။အရမျးမိုကျတဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေို မလှတျသှားပါစနေဲ့။
အနားယူမယျ၊ဓာတျပုံလှလှလေးတှရေိုကျမယျဆိုရငျတော့ Vondelpark ကိုသှားပါ။အဲ့ဒီမှာ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူနိုငျပွီး မွို့လေးရဲ့ အကောငျးဆုံးပနျးခွံတဈခုဖွဈပါတယျ။
သငျက အနုပညာပနျးခြီလကျရာတှကေို နှဈသကျမွတျနိုးသူဆိုရငျ Van Gogh museum ကိုသှားလညျဖို့မမပေ့ါနဲ့။Vincent van Gogh ရဲ့ အံ့မခနျးဖှယျပနျးခြီလကျရာတှေ၊စာတှနေဲ့ တခွားနာမညျကွီးပနျးခြီပညာရှငျတှရေဲ့လကျရာတှကေိုစုဆောငျးထားတဲ့နရောတဈခုဖွဈပါတယျ။နှဈတိုငျး လူသနျးပေါငျး ၁.၆သနျးလာရောကျကွညျ့ရှုကွတဲ့ပွတိုကျတဈခုပါ။
Amsterdam မွို့လေးကို အပျေါစီးကနကွေညျ့ခငျြတယျဆိုရငျ A’DAM Tower ကိုခနျြထားခဲ့လို့မရပါဘူး။A’DAM Tower ရဲ့ အစှနျးမှာ သညျးထိတျရငျဖိုစှနျ့စား
ခငျြသူတှအေတှကျ ဒနျးလညျးရှိပါတယျ။ဥရောပရဲ့ အမွငျ့ဆုံးဒနျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
Amsterdam ရောကျရငျ အဓိကလုပျရမှာက တဈခုရှိပါသေးတယျ။အဲ့ဒါကတော့ ဥမငျလိုဏျခေါငျးတှအေောကျကနေ လှစေီးပွီးလညျပတျကွညျ့ရတဲ့အရသာ
လေးကို ခံစားဖို့မမခေဲ့ပါနဲ့။အဲ့ဒီမှာလှလေေးတှရှေိပါတယျ။မြားသောအားဖွငျ့ တဈနာရီနီးပါးကွာအောငျလှညျ့ပတျပို့ဆောငျပေးပါတယျ။စြေးနှုနျးလညျးအစားစားရှိတဲ့အတှကျ
ကိုယျ့ရဲ့ ဘတျဂကျြနဲ့ကိုကျညီတဲ့အပြျောစီးလှလေေးတှလေညျးသခြောရှေးခယျြပွီး Amsterdam မွို့လေးရဲ့ အလှကိုခံစားကွညျ့ပါ။
လညျပတျစရာတှကေ မကုနျသေးပါဘူး။ကိုယျ့ရဲ့ ခရီးသှားခေါငျးဆောငျကြှမျးကငျြနှံ့စပျရငျ နှံ့စပျသလောကျ ပြျောရှငျစရာတှခေံစားရမှာပါ။Amsterdam ရောကျ